Daawo Goos Gooska iyo Sawirada Daniel Sturdige oo Hurdada u diidey Taageerayaasha Chelsea | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Daawo Goos Gooska iyo Sawirada Daniel Sturdige oo Hurdada u diidey Taageerayaasha Chelsea
(30-9-2018) Kooxaha Cheslea iyo Liverpool ayaa barbaro kukala tagaya kadib ciyaar xiiso leh oo ay labada koox ku yeesheen gegida Stamford Bridge.
Kulankan oo ahaa kulanki 7-aad oo ay labada koox horyaalka ka ciyaaraan ayay labada koox garoonak soo galeen iyagoo mid kasta ay ilaashaaysa rikoodhkeeda guuldarro la’aanta ee ay Xilli ciyareedkan ku bilaabeeen, waxaana daqiiqadi25 hogaankaciyaarta la wareegay kooxda Chelsea waxaana u saxiixay Eden Hazard oo caawin ka helay Mateo Kovacic, waxaana qaybta hore lagu kala nastay 1-0.
Marki laysku soo laabtay labada koox ayaa bandhig ciyaared weerar iyo weerar celis ahsameeyay waxaana Cheslea oo dabaal-dagga guusha isu diyaarinaysa goolka barbaraha daqiiqadi 89 kaga naxsaday Daniel Sturrdige oo caawin ka helay Shaqiri.
Liverpool ayaa sidaasi hogaanka ciyaarta min 19 dhibcood kula hogaaminaysa kooxda Manchester City, waloow ay faraqa goolasha City ku hayso.
Cheslea ayaa saddaxaad 17 dhibcood ku haysa, halka Tottenham iyo Arsenal oo maanta guulaystay ay 15 dhibcood leeyihiin.